Mudaaharaadyo Hor Leh Oo Ka Bilaawday Magaalada Addis Ababa.
Wednesday September 13, 2017 - 08:36:11 in Wararka by Super Admin
Sida ay faafisay warbaahinta taageerta kooxaha mucaaradka Itoobiya dibad baxyo ballaaran ayaa ka socda magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa.
Wararka ka imaanaya itoobiya waxay sheegayaan in tobanaan kun shacab ah ay ka qeyb qaadanayaan iskusoo baxyo ballaaran oo dadku ku dalbanayaan isbedel dhanka maamulka ah iyo in dowladdu ay joojiso xasuuqa ay ugeysanayso dadka dhigayada kacdoonada.
Goob joogayaal ayaa sheegay in dadka oo lulaya astaanta kacdoonka shacbiga Itoobiya ay isugusoo baxeen waddooyinka waaweyn ee magaalada Addis Ababa, kumanaan katirsan ciidamada Booliska iyo sirdoonka ayaa dadka dibad baxyada dhigaya u adeegsanaya awood xad dhaaf ah.
Saraakiil dibad joog ah oo katirsan Mucaaradka ayaa sheegay in dibad baxyadan lagu taageerayo kacdoonka ay wadaan qowmiyadaha Oromada iyo Amxaarada, rabshadaha lagasoo sheegayo magaalada Addis Ababa ayaa kusoo aadaya xilli Itoobiya ay u dabaal degayso sanadka cusub ee gaarka u ah Nidaamka wadankaasi ka arrimiyo.
Bilihii lasoo dhaafay dagaallo culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo xoogaga mucaaradka ayaa ka socda inta badan gobollada ay degaan qowmiyadaha Oromiya iyo Amxaarada.